Ubuntu Touch OTA-19 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Kubva kuLinux
Mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeUbuntu Kubata OTA-19 yakaziviswa iyo inouya pamwe nedzimwe shanduko nyowani uye kunyanya nekugadzirisa bug uko mamwe acho akaratidzirwa sekukosha.
1 Main nhau dzeUbuntu Bata OTA 19
2 Tora Ubuntu Bata OTA-19
Main nhau dzeUbuntu Bata OTA 19
Iyi vhezheni itsva ye Ubuntu Bata OTA-19 ichiri kubva paUbuntu 16.04 Uye kunyangwe paine zvivimbiso kubva kune vanogadzira izvozvi zvekukwanisa kuenda kune imwe vhezheni, kuedza kwevagadziri kuchiri kutarisana nekugadzirira shanduko kuUbuntu 20.04.
Kubva pane shanduko muOTA-19, zvinoonekwa izvo qml-module-qtwebview uye libqt5webview5-dev mapakeji akawedzerwa kuhurongwa hwekuvandudza kunyorera, mune izvo zvinongedzo zvakagadzirirwa kushandisa injini yeQtWebEngine. Zvemidziyo inotsigira matavi epakati e Halium 5.1 uye 7.1, iyo inopa yakaderera-chikamu nhurikidzwa kurerutsa rutsigiro rwehardware, iko kugona kuwana iyo gyroscope uye magnetic field sensors yakawedzerwa.
Izvo zvemidziyo ine Halium 9 ne10, idzi dzinoshandisa sensorfw pachinzvimbo chenhaka yedu api-chikuva uye nekudaro vatove nerutsigiro rweiyo gyroscope, kunyangwe ivo vanogadzira vachitaura kuti nekuda kwezvimwe zvikonzero, iyo sensor yeMagnetic munda haina kuburitswa parizvino, saka vachashanda kugadzirisa izvi.
Imwe shanduko ndeye muMessenger, umo otomatiki kuratidzwa kweye-skrini keyboard yakaremara, iyo yaikanganisa kuverenga kwemishumo inouya, iyo iyo keyboard yakaratidzwa netarisiro yekuti mushandisi angada kunyora mhinduro.
Pamusoro pezvo, kuburitswa kweasina basa ekupinda pasiwedhi dialogs panguva yekumisikidzwa kweasina waya kubatana kwakabviswa.
Uyewo yakagadzirisa mamiriro akadzivirira mimhanzi kubva kumbomiswa kana tambo yehefoni yakabviswa uye pachinzvimbo ichi ichienderera mberi ichitamba kuburikidza nemukurukuri mukuru wechigadzirwa, zvichinyanyisa uye zvakare yakagadzirisa chakakomba midhiya-hub kukanganisa kusvika ikozvino izvo zvakatadzisa mudziyo kuti urege kurara kana zvidimbu zviviri zveaudio zvakaridzwa zvakateedzana, pamwe zvakare kana zvakabatana mumhanzi uye maratidziro ehurongwa, kana chero musanganiswa wezvinokonzeresa zvingave zviripo. Midhiya-hub yakanga isiri kubvisa zvese zvakakumbirwa zvekuvharisa zvakanaka, semhedzisiro yedhizaini irikudhonza bhatiri nekukurumidza.
Zvakare iyo kamera uye skrini haina kukwanisa kuburitsa raidikanwa ruzha mhedzisiro, Mhedzisiro iyi yakauya ichibva mukati meiyo Android mudziyo uye vagadziri vakatsiviwa nezwi riri nani rinotaridzika kunge kurira kwekamera chaiko.
Imwe bhagi iyo yaive yakagadziriswa fue pane iyo Pixel 3a, sezvo muchigadzirwa ichi kudzima hakuchina chakarembera mudziyo, zvichikonzera kuzere bhatiri kupera, uye zvakare iyo proximity sensor ikozvino inoshanda nemazvo panguva yekufona. Zvakare, kurekodha vhidhiyo kwaive nedambudziko rekutora ruzha nemazvo mune mamwe mamiriro, zvichikonzera chando kamera kamera. Izvo zvinogona zvakare kugadzirisa mamwe madhivha ane dambudziko rakafanana.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani yakaburitswa vhezheni, iwe unogona kutarisa iyo ruzivo mu chinotevera chinongedzo.
Tora Ubuntu Bata OTA-19
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Ubuntu Touch OTA-19 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo